Psychology Archives - Sushil Silwal
फिनल्यान्ड सबै स्कूल विषयहरुबाट छुटकारा पाउनको लागी विश्वमा पहिलो देश बन्नेछ
No Comments on फिनल्यान्ड सबै स्कूल विषयहरुबाट छुटकारा पाउनको लागी विश्वमा पहिलो देश बन्नेछ
प्रविधिको युगमा र सजिलैसँग पहुँचयोग्य जानकारीको युगमा, हाम्रा स्कूलहरूले अझै पनि हामीबाट पुस्तकबाट सबै कुरा थाहा पाउने आशा गर्दछन्, जुन हामीले वास्तवमै हाम्रो व्यावसायिक विकासमा चाहिने कुराको हो कि भनेर सोच्दै बिना।
तपाईले कति पटक सोच्नु भएको छ कि यदि तपाईलाई बिषयहरु चाहियो भने तपाईले सिक्नको लागि बनाउनु भएको हो किनकि पाठ्यक्रमले त्यसो भन्यो? फिनल्याण्डले आफ्नो शैक्षिक प्रणालीमा यसलाई परिवर्तन गर्ने र २१ औं शताब्दीका लागि उपयुक्त हुने कुरा ल्याउने निर्णय गरेको छ।
Source : toolbox.finland.fi
२०२० सम्ममा, भौतिकी, गणित, साहित्य, इतिहास वा भूगोलको कक्षाको सट्टा फिनल्याण्डले शिक्षाको माध्यमबाट जीवनमा भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छ। घटना आधारित शिक्षामा स्वागत छ!
जस्तै फेनोमेनल एजुकेशनले आफ्नो वेबसाइटमा भनेको छ, “फोनोमोन बेस्ड लर्निंग (फेनोबिएल) र शिक्षणमा, समग्र वास्तविक घटनाले सिक्ने शुरुवात गर्दछ। घटनाहरूको वास्तविक प्रसंगमा पूर्ण संस्थाहरूको रूपमा अध्ययन गरिन्छ, र उनीहरूसँग सम्बन्धित सूचना र सीपहरू विषयहरू बीचको सीमा पार गरेर अध्ययन गरिन्छ। ”
यसको मतलब यो सिक्नुको लागि भौतिक विज्ञान (वा कुनै अन्य विषय) सिक्नुको सट्टा विद्यार्थीहरूलाई छनौट गर्ने अवसर दिइनेछ।
यी घटनाहरू एक अन्तःविषय दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरिनेछ, जसको अर्थ विषयहरू समावेश हुनेछन्, तर केवल ती (र केवल ती भागहरू) जसले विषयमा उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याउँछ।
उदाहरण को लागी, एक छात्र जो एक व्यावसायिक कोर्स अध्ययन गर्न चाहान्छ “क्याफेटरिया सेवा” लिन सक्छ र घटना गणित, भाषा, लेखन र संचार कौशल को तत्वहरु द्वारा अध्ययन गरिनेछ। अर्को उदाहरण यूरोपियन युनियन हो, जसमा अर्थशास्त्र, भाषाहरू, भूगोल र इतिहास समावेश हुन्छ।
अब तपाइँको पेशालाई उदाहरणको रूपमा लिनुहोस् र यससँग जोडिएको जान्न आवश्यक पर्ने सबै जानकारीहरू बारे सोच्नुहोस् – अब तपाइँ फेनोबिल तरीकाले सोच्दै हुनुहुन्छ!
यस प्रकारको शिक्षाले दुवै फेस-टु फेस र अनलाइन सत्रहरू समावेश गर्दछ, ई-लर्निंगको प्रक्रियाको माध्यमबाट टेक्नोलोजी र इन्टर्नेटको फाइदाजनक प्रयोगमा कडा जोडका साथ। तपाईं यसको बारेमा यहाँ अधिक पढ्न सक्नुहुन्छ।
सिक्ने प्रक्रियामा, विद्यार्थीहरूले आफ्ना साथीहरू र शिक्षकहरूसँग जानकारी साझा गरेर सामूहिक रूपमा अन्वेषण र नयाँ सूचनालाई भवन निर्माण उपकरणको रूपमा सहयोग गर्न सक्षम हुनेछन्।
शिक्षण शैली पनि परिवर्तन हुन गइरहेको छ!
शिक्षक केन्द्रित शिक्षाको परम्परागत शैलीको सट्टा, विद्यार्थीहरू उनीहरूको डेस्कको पछाडि बसेर र शिक्षकले दिएको हरेक निर्देशन रेकर्ड गर्दै, दृष्टिकोण एक समग्र तहमा परिवर्तन हुन गइरहेको छ। यसको मतलब प्रत्येक घटना हुनेछ
जे होस्, फेनोमेनल लर्निंगले भनेझैं “अभूतपूर्व आधारभूत शिक्षणको शुरुवात बिन्दु भनेको रचनावाद हो, जसमा सिक्नेहरू सक्रिय ज्ञान निर्माणकर्ताको रूपमा देखिन्छन् र सूचनालाई ‘साना टुक्रा’ बाट निर्मित समस्या समाधानको नतिजाको रूपमा हेरिएको छ। सम्पूर्णमा जुन त्यस समयमा प्रयोग गरिएको अवस्थाको अनुरूप हुन्छ। ”
यो शैक्षिक प्रणाली एक सहयोगी सेटिंग मा झुकाव समावेश गर्न को झुकाव (उदाहरण टीम वर्क), जहाँ तिनीहरू जानकारी मा गठन गरिएको हेर्न चाहानुहुन्छ
यो दृष्टिकोण अन्वेषणमा आधारित शिक्षा, समस्या समाधान र परियोजना र पोर्टफोलियो सिकाई समर्थन गर्न गइरहेको छ। अन्तिम चरण व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन गइरहेको छ, सम्पूर्ण प्रक्रियाको नतीजाका रूपमा देखिएको छ।
यस सुधारका लागि बिभिन्न विषयहरूका शिक्षकहरूबीच धेरै सहयोगको आवश्यक्ता छ र यसैले शिक्षकहरू गहन प्रशिक्षण पाउँदैछन्।
वास्तवमा, हेलसिंकीमा %०% शिक्षकहरू नयाँ प्रणालीसँगै तयारी कार्यमा संलग्न भइसकेका छन्।
सह-शिक्षण को पाठ्यक्रम निर्माण को आधार मा छ, एक भन्दा बढी विषय विशेषज्ञ र इन नयाँ शिक्षण शैली अँगाल्ने शिक्षकहरु को इनपुट संग मान्यता को संकेतको रूपमा आफ्नो तलब मा एक सानो वृद्धि प्राप्त गर्नेछ।
शिक्षण दृष्टिकोणबाट, यो शैली धेरै इनामदायी र शिक्षकहरूका लागि पनि सार्थक छ। केही शिक्षकहरू, जसले आफ्नो शैलीमा यो शैली लागू गरिसकेका छन्, भन्छन् कि तिनीहरू पुरानो शैलीमा फर्केर जान सक्दैनन्।
यो वास्तवमा कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, किनकि यस शिक्षण शैलीको अन्तर्क्रिया त्यस्तो कुरा हो जुन प्रत्येक शिक्षकले सधै सपना देख्दछ।
हाल, स्कूलहरू कम्तिमा वर्षमा एक पटक अभूतपूर्व-आधारित शिक्षाको अवधि परिचय गर्न बाध्य छन्। योजना २०२० सम्ममा फेनोबिएल दृष्टिकोणलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने हो।
प्लेफुल लर्निंग सेन्टर भनिने उस्तै दृष्टिकोण प्रि-स्कूल क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ र यो अभूतपूर्व-आधारित शिक्षाको लागि सुरूवात बिन्दुको रूपमा सेवा गर्न गइरहेको छ।
एलिजाबेथ विलियम्स द्वारा
Source : https://curiousmindmagazine.com/